“गोबेल्सहरुको सुरक्षामा बसेर यी हिटलरहरु गणतन्त्रलाई अपहरण गर्ने पक्षमा छन्” « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
नेपालको गणतन्त्रवादी पार्टीहरुले गणतन्त्र बाहेकको अर्को कुनै पनि संगठन र संघर्षहरु भएका गरेका छैनन्। यहाँनेर मैले गणतन्त्रवादी पार्टीहरु भन्न खोजेको हो । गणतन्त्रको लडाईमा विभिन्न पटक गणतन्त्रको अपहरण पनि भएका छन्तर संघर्ष चाँहि गणतन्त्रको प्राप्तिको लागि मात्र भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी पार्टीहरु जन्मनुभन्दा अगाडी पनि गणतन्त्रको लागि संघर्षहरु भएका थिए । त्यस हिसाबले गणतन्त्रमा अथवा गणतन्त्र प्राप्तिको लडाईमा कुनै पनि पार्टी विशेषको ट्याग झुन्ड्याईरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
यो गणतान्त्रिक अभियानमा धेरै पल्ट गणतन्त्रकोअपहरण भएको छ । त्यो अपहरण २०१७ सालमा सुरु भएको थियो, जतिखेर बि.पी. कोइरालाको नेत्तृत्वमा सरकार बनिएको थियो । त्यो गणतन्त्र विरोधीहरुले अपहरण गरे । त्यो गणतन्त्रविरोधीहरुले अपहरण गरेपछि त्यसका प्रतिक्रान्तिकारीहरु पनि त्यहाँ जन्मन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पार्टीलाई छेदविच्छेद गराउने ती प्रतिक्रान्तिकारीहरुमा को रहे भन्दाखेरि डा. तुलसी गिरी र परशुनारायण चौधरी नै हुन्। केशरजङ्ग रायमाझीहरु निर्वाचित र बहुमत प्राप्त प्रतिक्रान्तिकारीहरु जन्मेका थिए भन्ने कुराहरु इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले यी प्रतिक्रान्तिकारीहरु कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हरेक बेला जन्मने गर्छन् र हरेक बेला उनीहरु चलमलाउने गर्छन् । बि.पी.कोइरालालाई जेल ठोसेर अनि मुलुकको धर्म हिन्दु धर्म हुन्छ भन्नेहरु त्यतिबेलाका तानाशाहहरु हुन्।
त्यसैगरि ओखलढुंगा गणतन्त्र प्राप्तिको युद्धमा प्रतिक्रान्तिकारीहरुले बाटैबाट युद्धमोर्चामा जाँदा आफ्नो असली रुप देखाएको हुनाले गणतन्त्र प्राप्तिको युद्ध असफल भयो । अब व्यक्तिगत रुपमा पनि गणतन्त्रवादीहरु, रिपब्लिकनहरुको कुनै पनि राजनीतिमा नरहीकन पनि अथवा शुद्ध आफ्नो पेशा गर्ने अथवा नन–पोलिटिकल मान्छेहरु पनि गणतन्त्रको प्राप्तिको लडाईमा आफ्नो ज्यान दिएर लडेको हामी उदाहरण पाउँछौ । जस्तो कि केशव प्रसाद कोइराला । वहाँ एउटा महा–विद्वान हुनुहुन्थ्यो र सन्४५मा फरेष्ट साईन्समा कराँची युनिभर्सिटीबाट पास गर्नु भएको हो । वहाँले जहिले पनि वैदिक तरिकाबाट हिसाबहरु गर्नुहुन्थ्यो ।
अब अहिले कोही कोही कांग्रेसीहरु के भन्छन्त भन्दाखेरि यहाँचाँहि ‘बी.पी. ले यसो भनेका थिए र हामीले पनि हिन्दु धर्म भनेका हौ ।’ भनेर भन्छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा होइन । गणतन्त्र प्राप्तिको लडाईबाहेक नेपालमा कुनै अरु संघर्ष नै भएको छैन र त्यो हुँदैन पनि अब । किनभने अहिले पनि गणतन्त्रको प्राप्तिको मात्र लडाई हो । त्यो पछिल्लो कालमा आएर मदन भण्डारीदेखि लिएर गिरिजा प्रसाद कोइराला र अन्तमा अध्यक्ष प्रचण्ड समेतको यो नै मुख्य लडाई हो । गणतन्त्र प्राप्ति भनेपछि अब अहिलेको अवस्था अलिकति फरक छ किनभने एकपटक यो विश्व थर्काउने सामन्तवाद र साम्राज्यवादका दुमछल्लाहरुलाई काबुमा ल्याउने जुन जनयुद्ध भयो त्यहि जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरिपनि अब यो गणतन्त्रको लडाईमा एकरुपता आएको हो ।
यसो भएको हुनाले यहाँ यो फेरि पनि अपहरण होला भनेर अहिले राजनीतिक पार्टीहरु सतर्क र सजग हुनु पर्ने कुराहरु छ । त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेर जी.पी.कोइरालाले जो कि जनताको छोराले इतिहासमा पहिलो पटक राजकीय सत्ता र राज्य सत्ताको उपभोग गर्नुभएको हो । यो भन्दा ठूलो अधिकार कहीँपनि मिल्दैन । इतिहासकै यो ठूलो अधिकार हो । अब संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गरेको छ । के.बी.गुरुङ्ग नेपाली कांग्रेसकै व्यक्तित्व हुन्। वहाँकै नेत्तृत्वमा संसद्बसेर यो गणतन्त्र अहिलेको गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ । अहिलेको गणतन्त्र अलि फरक किसिमले, अलि विकसित रुपले भएको हामी पाउँछौ । किनभने यसमा संविधान सभाले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनेको छ । त्यसले गर्दा खेरि अब अहिले संघीयताको लागि फेरि अर्को गणतान्त्रिक लडाई लड्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यो जनयुद्धले थर्कमान पारेर साम्राज्यवादीहरुको मुटु थर्काएर ल्याएको संविधानलाई निस्तेज गर्ने र यसका अवयवहरुलाई भड्काउने, त्यसले गर्दा खेरि यो गणतन्त्रको विरुद्धमा उठ्नेहरु संघीयता विरोधीहरु पनि हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने कुरा अपरिवर्तनीय छ । यो जनयुद्धको तापले र अध्यक्षकमरेड प्रचण्ड त के भन्नुहुन्छ भने ‘जनयुद्ध गर्ने र जनआन्दोलन गर्नेहरुको बीचमा फ्युजन भएर आएको यो गणतन्त्र हो । यो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता आदि प्रष्ट उल्लेख भएको गणतन्त्र हो’ भनेर भन्नु हुन्छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला जसले चाँहि इतिहासमा राजकीय शक्ति र राज्य शक्ति दुवै कुरा प्रयोग गर्न पायो, वहाँले असाध्यै डिप्लोम्याटिक कुरा गर्नु भयो । डा. शेखर कोइरालाले भन्नु भए अनुसार वहाँले गणतन्त्रको नयाँ परिभाषा गर्नु भएको छ । जस्तो कि वहाँले ‘टोटल डेमोक्रेसि’ भनेर भन्नु भएको छ अथवा ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ । ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ भनेकै गणतन्त्र हो । यसमा कुनै दुई विधा हुँदैन । यदि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहेर यसलाई यो इतिहासको ऐतिहासिक भारलाई सहयोग नगरेको भए आज हामी एउटा सामन्तवादीहरुको अथवा यो साम्राज्यवादीहरुको चंगुलमा हुन्थ्यौ । तर त्यो नगरिकन वहाँले सहयोग गर्नु भयो । अब हामीले बुझेको गणतन्त्र भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । यसको कतै कतै सुनिन्छ कि फेरि अपहरण हुन्छ भनेर भनिन्छ । यहाँ सयौं हिटलरहरु जन्मिसकेका छन् । हजारौं हजार गोबेल्सहरु तम्तयार छन् । तिनै गोबेल्सहरुको सुरक्षामा बसेर यी हिटलरहरु यो अहिलेको पाएको गणतन्त्रलाई अपहरण गर्ने पक्षमा छन्।
यसको एउटा उदाहरण दिन्छु कि झापाबाट कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई हराउने र मोरङ्गबाट डा. शेखर कोइरालालाई हराउने कपटपूर्ण साजिस थियो भन्न सकिन्छ । त्यो साजिस अति भयंकर थियो, यसरी डिजाईन गरिएको थियो कि नेपाली जनताको संघर्षले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विरुद्धमा नै थियो भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्न सकिन्छ । यो साजिस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि पनि अपहरण गर्ने षडयन्त्रमूलक उद्देश्य भएको कुरा हामी देख्न सक्छौ । जुन नियतले यो गणतन्त्रलाई फेरि अपहरण गर्ने बुझिन्छ । यो कुराको लागि सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी पार्टीहरु, व्यक्तिहरुले आफूलाई आत्मालोचना गर्नुपर्छ र माफी माग्नु पर्छ । यो भयंकर षड्यन्त्रमूलक क्रिया थियो । कृष्ण प्रसाद सिटौला र डा. शेखर कोइरालालाई हराउने जुन षड्यन्त्र भएको छ त्यो भयंकर नियोजित रुपमा, एकदमै षड्यन्त्रपूर्वक भएको कुरा म मान्छु । त्यतिखेर पनि कार्यकर्ताहरुले छातीमा ढुंगा राखेर भोट हालेका छन्।
अब सबै गणतन्त्रवादी पार्टीहरुले गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै हो अथवा त्यस प्रकारको संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई असाध्यै विवादरहित बनाउने, अपरिवर्तनीय बनाउने हो । यो नेपाली जनवादी क्रान्तिको आकाशमा, नेपाली गणतन्त्र प्राप्तिको लडाईको आकाशमा यो जुन काला बादलहरु मडारिरहेको छ यो राम्रो लक्षण देखिँदैन । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्किनभने गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका भएदेखि को मधेसी, को पहाडी हुने नै थिएनन् । आस्थाका बन्दीहरु जेलमा हुने नै थिएनन् । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । किन पाएका छैनन् भने विप्लब समूहलाई ब्यान्ड घोषणा गरिएकोले हो ।
गणतन्त्र त्यत्तिकै हुँदैन । हरेक संघर्षमा विचारको पनि विकास हुन्छ । कसैले यहाँ पार्टी एकता गराउँछु भनेर गरेको धुन लिएको छ भने त्यो पनि राम्रै हो तर यो अहिलेको मुख्य लडाई गणतन्त्र प्राप्तिकै हो । गणतन्त्रलाई सुदृढ गराउनु नै हो । यहाँ काला बादलहरु र षड्यन्त्रका तानाबानाहरु बुन्न थालिएको छ । यहाँ पनि फेरि गणतन्त्रलाई अपरहण गर्ने देखा परेको छ राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको भान हुन्छ । यहाँनेर विचारको विकास हुन्छ । विचारको विकास हुने हो भने देखि यो जनयुद्ध त जारी रहेको अवस्था हो । जनयुद्धले जितेको अवस्था हो । विजय प्राप्त गरेको अवस्था हो । यसमा जनयुद्धदेखि थाकेर प्रतिक्रान्तिकारी हिँडेको अवस्था पनि हो । यिनीहरुको रुपमा हरेक कुराको रुपमा रुप मात्रै हुँदैन त्यसको विकास पनि हुन्छ । भावनाको पनि विकास हुन्छ । सिद्धान्तको पनि विकास हुन्छ ।